Sweden | Otu Di na Nwunye
Gụkwuo banyere Sweden!
Ude ude dị ka nri anwansi. Ọ dị ka ihe niile ọ metụrụ na-aghọzi ọla edo culinary. Kedu ihe na-aga na ude chiiz, oleekwa otu ị ga - esi jiri ya mee ihe na nri ụbọchị ọ bụla iji mee ka kichin gị sie ike ma dị ụtọ? Ọ bụrụ na ịnwee ude chiiz dina n'akụkụ kichin gị, lee ụfọdụ nri nri ị nwere ike ijikọ ya na nke nwere ike ọ gaghị enwe… GỤKWUO
Ihe 5 Ihe Know Ga-Mara tupu Toga na Ugwu Galapagos
Toga agwaetiti Galapagos bụ njem nlere anya maka ọtụtụ mmadụ. Agwaetiti Ecuadorian mara mma ma jupụta n'ọhịa nke ị ga-ahụ mgbe ụfọdụ ikwere. Y’oburu na ị na akwado ịla njem njem gị nke a na-akpọ The Galapagos mgbe ahụ ike yie gị obi ụtọ, yabụ, kwere nghọta. Ọbụnadị n'ọ theụ nke iche maka njem gị, e… GỤKWUO